I-Huawei Y9 (2019) iye yavuza i-TENAA | I-Androidsis
U-Huawei ebejonge e-Y9 (2019) iiveki ezininzi ngoku. Ngeli xesha, emva kwamahemuhemu avela kwesi sixhobo, udidi oluphakathi olulandelayo lwenkampani yaseTshayina luyavela kwakhona, kwaye ayikho kwenye indawo ngaphandle kwi Tenaa ukuhambelana namazwi, iarhente yaseTshayina esiqhele kakuhle kuluhlu lweenkcukacha zeefowuni ezizayo ezinokubhengezwa kungekudala.
Ngokwesiseko sedatha, uphawu luye lwazilungiselela phakathi kuluhlu ukusebenza ngokugqwesileyo, ke ukufika kwayo kwintengiso kugcwele kulindelo.
IHuawei Y9 (2019), ebizwa ngegama lekhowudi "JKM-AL00a", icocwe ngescreen esigcweleyo se -HD2.340 yeepikseli ezingama-1.080 x XNUMX, Ephela ngokucacileyo ukuba ishwankathelwe kwibhodi encinci ye-19: 9, njengoko bekulindelwe. Oku ubude idiagonal of 6.5 intshi. Kwaye xa kufikwa kwezinye iinkcukacha eziphambili, i-octa-core System-on-Chip ye-2.2 GHz yile nto iphantsi kwebhodi. Le processor ingaqondakaliyo yinkampani edumileyo yaseKirin 710.
Ngokumalunga nobungakanani bememori yesiphelo, Sithetha nge-RAM ye-4 GB yomthamo kunye nendawo yokugcina yangaphakathi ye-64 kunye ne-128 GB, esinokuyandisa ngokusebenzisa ikhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-400 GB. Oku kuthetha ukuba i-Y9 (2019) iya kufika kwimarike ngeendlela ezimbini zememori.
Icandelo lokufota lenziwe nge Inkqubo yekhamera engama-20 kunye ne-2MP, eya kuthi ifike ngezibonelelo ze-IA. Kwelinye icala, inzwa ezimbini zangaphambili zine-16MP enokubangela kwaye enye ayichazwanga yi-TENAA, ekunokwenzeka ukuba yi-2MP.
Okokugqibela, iarhente idwelise umthamo webhetri oza kusetyenziswa ngumnxeba ukuhlala kuwo. Sithetha ngale nto ukuba unebhetri ye-3.900 mAh, eya kuthi isinike ukuzimela okuhle, ngaphandle kwamathandabuzo. Ukongeza koku, uluhlu luye lwabonisa oko iza ngombala omnyama, epinki, luhlaza okwesibhakabhaka nemfusa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucaciswa kweHuawei Y9 entsha (2019) echazwe yi-TENAA